Guryaha raaxada ee Jasiiradaha Balearic | Ragga Stylish
Guryaha raaxada leh ee ugu wanaagsan Mallorca iyo Ibiza
Jasiiradaha Balearic waligood ma niyad jabaan markay tahay qorraxda iyo ciidda. Markay tahay joogitaanka, waxaa jira hoteelo waawayn, in kastoo iyagana lagu diyaariyo guryo raaxo leh kuwa raadinaya gaar ahaanshaha iyo asturnaanta.
Kuwani waa qaar ka mid ah villayada ugu wanaagsan ee aad kireysan karto Mallorca iyo Ibiza xagaagan. Nasasho iyo xasillooni qoys ama madadaalo saaxiibadaa ... adigu dooro.
Dhismaha la iftiimiyay ayaa ah Villa royale, taas oo, marka lagu daro aragtiyaha aan la dhaafi karin ee Badda Mediterranean-ka, waxay bixisaa laba jiko, dhowr dabaq, qol fadhida dabaq kasta, barkad aan dhammaad lahayn iyo diyaarad leh Jacuzzi. Kireynta gurigan raaxada leh ee Mallorcan oo leh awood 12 qof waxay u dhigantaa 25.000 euro usbuucii.
Guriga Miami Waa mid ka mid ah guryaha fasaxa badan ee Mallorca. Waxaa ku jira toddobo qol jiif, shineemo, spa, jimicsi, laba barkadood, iyo xitaa helipad. Kirada todobaadlaha ahi waa kudhowaad 71.000 oo euro, inkasta oo qiimaha ay kujiraan adeegyada cunto kariye iyo adeege.
Sky Villa Waxaa loogu talagalay kooxaha asxaabta ah ee booqda Ibiza si ay u aadaan naadi. Waxay bixisaa barkad aan xad lahayn, jacuzzi, sauna, baarka, dabaqa qoob ka ciyaarka iyo cunto kariye. Awood u leh sideed qof oo ku jira afar qol jiif ah, villaan wuxuu ku kacaa qiyaastii 4.400 euro usbuucii.
Ku duugan buuraha Playa de Las Salinas, Rock Villa Waxay ku qalabeysan tahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u martigeliso xafladaha gaarka loo leeyahay ee aan la iloobi karin, oo ay ku jiraan dabaqa qoob ka ciyaarka iyo qolka DJ. Dabcan, barkad aan xadidneyn lama waayi karin, taas oo kiiskan la yimaada god hoosta. Waxay ku nooshahay kooxo ilaa 16 qof ah iyo qiimaheeda, 50.000 euro asbuucii, oo ay kujirto adeeg ka kooban sagaal qof oo hubiya inay wax waliba si habsami leh u socdaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Guryaha raaxada leh ee ugu wanaagsan Mallorca iyo Ibiza
Sidee loo helaa timo gaaban oo jilicsan xagaagan
Xilliga xagaaga, qalabka tayada leh ayaa farqiga sameeya